Service - Hangzhou poli Air Nkewa Equipment Co., Ltd
Ebe a bụ Service
Nga sales ọrụ
The ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ ngalaba na n'eziokwu, a zuru ezu iwebata nke ụlọ ọrụ na ngwaahịa, na-enye yiri technical data bụ ihe kasị zuru okè, aka imewe unit na-ebu teknuzu mgbanwe, na-ege ntị ka onye ọrụ na-atụ aro nke mkpa ngalaba, na imewe na rụpụta ngwaahịa dị ka kpọmkwem ọnọdụ, melite ngwaahịa, izute ezi uche chọrọ nke users.Provide usoro ezi uche oke ọrụ dị ka gas ọnọdụ.
Na ire ọrụ
Ọ dị ka mkpa iwu, iwu na ụkpụrụ nke ala na ikike na ọrụ nke aka n'ime nkwekọrịta nditịm soro okwu nke contractperformance.- mgbe irè ụbọchị nke nkwekọrịta ka ọrụ na Design Institute na provideequipment Eserese na ihe ọmụma zuru ezu.
The factory ngwá enweghị usoro na ngwaahịa akwụkwọ, mbukota ndepụta, akwụkwọ nnyocha, akwụkwọ nke mgbali arịa na ntuziaka maka ojiji.
The ụlọ ọrụ n'isi ụlọ ọrụ mgbe ire ọrụ ngalaba, na oruru ofresident itieutom ke mba multi region, onye ọ bụla ụlọ ọrụ na-onwem na ọkachamara ọrụaka ọrụ iji nye PSA technology na kacha elu oru planfor onye ọrụ, ndị ọzọ na-adọ na-enye ọrụ na àgwà mgbe ire ọrụ. Mgbe saleservice ụlọ ọrụ n'isi ụlọ ọrụ ekwentị: 13868185226/13588050818
The ngwá echichi na Jizọs na-ezipụ oge, ụlọ ọrụ dị ka nkwekọrịta na kwetara ka metụtara ọrụ.
Ọ natara a telex ma ọ bụ ekwentị ọrụ, na ụlọ ọrụ ndị ahịa na ọrụ servicedepartment ga n'egbughị oge, sị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa mgbe ire ọrụ pesonel nwere ike iru ọrụ na-na saịtị akụrụngwa idozi.
Anyị iru ọrụ ndekọ, aka ọrụ ngwá management; mgbe nile na-echetara ndị ọrụ na-eji dochie yi akụkụ, na-elele na ngwá na okwu kwesịrị imekwu nke ọma; melite ahịa ọrụ ọrụ file ndekọ, maka mmezi na ilekọta ndị ọrụ free nduzi akụrụngwa.
The mkpesa ekwentị: ma ọ bụrụ na ị na-na usoro nke na mmekọrịta ya na ụlọ ọrụ officeshave ọ bụla afọ, ị nwere ike kere n'ime ahịa management center polyempty na statutory ọrụ awa ọsịsọ na mkpesa Tel: 13868185226/13588050818
Faksị: +86 571 6343 0098